Press Conference organized by CTUM and MICS-TUsF On the current situation of Tripartite Mechanism – CTUM
အလုပ်သမား အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် ဆရာ၊ ဆရာများကို ထည့်သွင်းပေးစေလို
Published by ctum at January 25, 2019
အစိုးရ – အလုပ်ရှင် – အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ယန္တရားနှင့်
ပတ်သက်၍ လက်ရှိအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြရန်
CTUM နှင့် MICS – TUsF တို့ ကျင်းပပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
Press Conference organized by CTUM and MICS-TUsF
On the current situation of Tripartite Mechanism (Government – Employers – Trade Unions) (2019 Jan 25 at Sky Palace Hotel in Nay Pyi Taw)
ထိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် CTUM ဥက္ကဌ ဦးမောင်မောင်နှင့် MICS – TUsF အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသက်နှင်းအောင်တို့မှ သုံးပွင့်ဆိုင်အပြန်အလှန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း ဖိုရမ် NTDF ရှိ လက်ရှိ လူပ်ရှားမှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၁၁ခုနှစ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေနှင့် ၂၀၁၂ခုနှစ် အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းရေးဥပဒေ (၂)ရပ်ကို ထပ်မံပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များအသံများကို လွှတ်တော်အနေဖြင့် ထည့်သွင်းဆွေးနွေးပေးရန် အတွက် ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထိုပြင် သုံးပွင့်ဆိုင်ယန္တရားမှ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုကို ဆိုင်းငံ့ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဥပဒေ (၂)ရပ်တွင် အလုပ်သမားများ၏ အသံများ၊ သဘောထားများ အမှန်တကယ် ပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်သမားများ အခွင့်အရေး ကာကွယ်ခြင်း မရှိသည့် ဥပဒေများ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခြင်းကို ဆက်လက် ကန့်ကွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
CTUM နှင့် MICS- TUsF အဖွဲ့ဝင်များ (၁၀၀)ခန့် တတ်ရောက်ခဲ့ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်တို့မှ လာရောက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Nay Pyi Taw, Myanmar( Trade unions)
CTUM and MICS-TUsF suspend participation in Tripartite Mechanism which Facilitated by the ILO, showingadisagreement over labor law amendments.
The Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM) and Myanmar Infrastructure, Craft & Service Trade Unions Federation (MICS-TUsF) jointly conductedapress conference, aiming to release the current situation of Tripartite Mechanism (Government-Employers-Trade Unions) at Sky Palace Hotel in Nay Pyi Taw, Myanmar on 25 January 2019.
U Maung Maung, the president of CTUM and MICS-TUsF General Secretary U Thet Hnin Aung explained the current situation of NTDF to the media, guests and the union leaders attended. They add that the legislators from the Parliaments shall take the voices of workers’ representatives into consideration in the discussions for the second amendments of 2011 Labor Organization Law and 2012 Settlement of Labor Dispute Law.
“We have involved in the labor law reform processes for over two years. It is seen that new proposed amendments (for the second time) to the labor organization law has become more repressive while we expect it shall be transparent and democratic. It is not also in accord with Freedom of Association. Therefore, we will no longer be participating in this process. It is difficult for us to recognize this labor law if the legislators from the Parliaments approve it. Our decision to suspend participation in the tripartite mechanism is based on this reason.” U Maung Maung said at the press conference.
Then both leaders announce that the Confederation of Trade Unions of Myanmar (CTUM) and Myanmar Infrastructure, Craft & Service Trade Unions Federation (MICS-TUsF) suspend participation in all tripartite mechanism for two weeks effecting from today, 25th January 2019.
In the event, the questions raised by the media were answered by U Maung Maung, the president of CTUM, the general secretary of MICS-TUsF U Thet Hnin Aung and Daw Phyo Sandar Soe, the joint general secretary of CTUM.